देवचुलीमा भैसीलाई लगाउने भ्याक्सिन रेग्मीलाई लागेपछि अस्पताल भर्ना, महिला जनप्रतिनिधिको गल्ति ! (भिडियो सहित) - Gandak News
देवचुलीमा भैसीलाई लगाउने भ्याक्सिन रेग्मीलाई लागेपछि अस्पताल भर्ना, महिला जनप्रतिनिधिको गल्ति ! (भिडियो सहित)
गण्डक न्यूज द्वारा २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:४८ मा प्रकाशित
नवलपुर । नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-१७ बस्ने कञ्चन रेग्मीको शरिरमा भैँसीलाई लगाउने खोरेतको भ्याक्सिन परेपछी अहिले भरतपुर अस्पताल चितवनमा भर्ना भएकी छन् ।
गत फागुन १५ गते देवचुली नगरपालिकाको पशु स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत खोरेतको भ्याक्सिन लगाउन गएको जनप्रतिनिधी सहितको टोलीबाट रेग्मीको दाहिने हातको पाखुरामा भ्याक्सिन परेपछी त्यसको असरले अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन ।
शरिर सुनिने र सास फेर्न असहज हुने अवस्था देखिएपछी मंगलबार रेग्मीलाई भरतपुर अस्पताल पुर्याइएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
देवचुली नगरपालिकाको पशु स्वास्थ्य कार्यालयले भ्याक्सिनको लागि खटाएको प्राविधिक एंव देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १६ की सदस्य महिला जनप्रतिनिधी समेत रहेकी जानकि गुरौँ लामिछानेले भैँसिलाई भ्याक्सिन लगाउने क्रममा कञ्चनको दाहिने हातमा भ्याक्सिनले चोट पुगेको थियो ।
भैसिलाई भ्याक्सिन लगाउदा भैसी चलेपछी उनिसँगै रहेकि कञ्चनको हातमा भ्याक्सिनले चोट पुगेको जानकि गुरौँले बताइन । विगत १५ वर्ष अघिदेखि निरन्तर रुपमा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्दै आएको समेत गुरौँको दाबि छ ।
नगरपालिकाले प्रदान गरेको ३५ दिने तालिम पश्चात गुरौँ खोरेतको भ्याक्सिन लगाउन हिडेकि देवचुली नगरपालिका पशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्याम कृष्ण तिवारीले बताएका छन् ।
भ्याक्सिन लगाउने क्रममा भैँसि चलेपछि कञ्चनको हातमा सुईले चोट पुर्याएको तर भ्याक्सिनले मानिसको शरीरमा असर नगर्ने समेत प्रमुख तिवारीको दाबी छ ।
नगरपालिकाले खटाएको कर्मचारीबाट गल्ति भएकाले पनि त्यसको खर्च देवचुली नगरपालिकाले ब्यहोर्ने पशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तिवारीले बताए ।
शरिरमा भ्याक्सिनले चोट पुर्याएको बताएकी कञ्चनले ईलाका प्रहरी कार्यालय रजहरमा समेत उजुरी गरेकी छन् । जनप्रतिनिधी समेत रहेकी जानकी गुरौँले बेवास्ता गरेको भन्दै दोषिलाई कारवाही र आफूँलाई उपचारको माग राख्दै कञ्चनले प्रहरीमा उजुरी गरेकी हुन् ।
लामिछानेले बिना लाइसेन्स खोरेतको भ्यक्सिन भैंसीलाई लगाउदा आफ्नो दाइने हातमा हानिदिएको रेग्मीले बताएकी छिन । श्रीमानको लाइसेन्स छ भन्दैमा लामिछानेले भ्याक्सिन लगाउदै हिंडेको समेत रेग्मीले बताईन । के जनप्रतिनिधिको काम लाइसेन्स बिना भ्यक्सिन लगाउदै हिंड्ने हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेकी छिन ।
पुरा भिडियो :
I want justice🙏🙏🙏 Please support me🙏Police le action liyena please help me❤
Posted by Kanchan Regmi on Saturday, 29 February 2020
सस्तोडिलद्वारा अत्यावश्यक वस्तु घरमै डेलिभरी:…
आदर्श नमुना क्लबद्वारा म्याग्दे गाउँपालिकाको राहत…
भारतमा बढ्दै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित, ४३७ जना…
तनहुँको शुक्लागण्डकीमा करेन्ट लागेर…
पोखराबाट पक्राउ परे यशुका अनुयायीलाई…
सरकारी कार्यालय बन्द गरिदै, सर्वसाधारण…